01.08.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमीले पढाइद्वारा आफ्नो कर्मातीत अवस्था बनाउनु छ , साथ-साथै पतितबाट पावन बनाउने मार्ग पनि बताउनु छ , रूहानी सेवा गर्नु छ।”
कुनचाहिँ मन्त्र याद राख्यौ भने पाप कर्महरूबाट बच्छौ?
बाबाले मन्त्र दिनुभएको छ– नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर... यही मन्त्र याद राख। तिमीले आफ्नो कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै पाप गर्नु छैन। कलियुगमा सबैबाट पाप कर्म नै हुन्छन् त्यसैले बाबाले यो युक्ति बताउनु हुन्छ, पवित्रताको गुण धारण गर– यही नम्बरवन गुण हो।
बच्चाहरू कसको सामुन्ने बसेका छौ? बुद्धिमा अवश्य आउँछ– हामी पतित-पावन सर्वका सद्गति दाता, आफ्नो बेहदको बाबाको सामुन्ने बसेका छौं। हुन त ब्रह्माको तनमा हुनुहुन्छ तापनि याद उहाँलाई गर्नुपर्छ। मनुष्य कसैले सबैको सद्गति गर्न सक्दैन। मनुष्यलाई पतित-पावन भनिदैन। बच्चाहरूले आफूलाई आत्मा सम्झनुपर्छ। हामी सबै आत्माहरूका पिता उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ। यो बच्चाहरूले जान्नुपर्छ र फेरि खुशी पनि हुनुपर्छ। हामी नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौं– यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। धेरै सहज मार्ग मिलिरहेको छ। केवल याद गर्नु छ र आफूमा दैवी गुण धारण गर्नु छ। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। नारदको उदाहरण पनि छ। यी सबै दृष्टान्त ज्ञानका सागर बाबाले नै दिनुभएको हो। जति पनि संन्यासी आदिले दृष्टान्त दिन्छन्, त्यो सबै बाबाले दिनुभएको हो। भक्तिमार्गमा केवल गायन गरिरहन्छन्। कछुवाको, सर्पको, कुमालकोटीको दृष्टान्त दिन्छन्। तर स्वयं केही पनि गर्न सक्दैनन्। बाबाले दिनुभएको दृष्टान्त भक्तिमार्गमा फेरि दोहोर्याउँछन्। भक्तिमार्ग हो नै विगतको। यस समय जो प्राक्टिकल हुन्छ त्यसको फेरि गायन हुन्छ। मनाउन त देवताहरूको जन्मदिन अथवा भगवानको जन्मदिन मनाउँछन् तर केही पनि जानेका छैनन्। अब तिमीले बुझिरहेका छौ। बाबासँग शिक्षा लिएर पतितबाट पावन पनि बन्छौ र पतितहरूलाई पावन बन्ने मार्ग पनि बताउँछौ। यो हो तिम्रो मुख्य रूहानी सेवा। पहिला सुरुमा कसैलाई पनि आत्माको ज्ञान दिनुपर्छ। तिमी आत्मा हौ। आत्माको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। आत्मा त अविनाशी हो। जब समय हुन्छ आत्मा शरीरमा आएर प्रवेश गर्छ। आफूलाई घरी-घरी आत्मा सम्झनुपर्छ। हामी आत्माहरूका पिता परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। परम शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यो पनि सदैव बच्चाहरूलाई याद रहनु पर्छ। यो भुल्नु हुँदैन। तिमीले जानेका छौ– अब फर्केर जानु छ। विनाश सामुन्ने खडा छ। सत्ययुगमा दैवी परिवार धेरै सानो हुन्छ। कलियुगमा त कति मनुष्य छन्। अनेक धर्म, अनेक मत छन्। सत्ययुगमा यो केही पनि हुँदैन। बच्चाहरूले सारा दिन बुद्धिमा यो कुरा ल्याउनु पर्छ। यो पढाइ हो। त्यस पढाइमा त कति किताब आदि हुन्छन्। हरेक क्लासमा नयाँ-नयाँ किताब किन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ त कुनै पनि किताब वा शास्त्र आदिको कुरा छैन। यसमा त एउटै कुरा, एउटै पढाइ छ। यहाँ जब ब्रिटिश सरकार थियो, राजाहरूका राज्य थिए, त्यतिबेला स्टेम्पमा पनि राजा-रानी सिवाय अरू कसैको फोटो राख्दैनथे। आजकल त हेर भक्त आदि जति पनि थिए उनीहरूको पनि स्टेम्प बनाइरहन्छन्। यी लक्ष्मी-नारायणको राज्यमा त चित्र पनि एउटै महाराजा-महारानीको हुन्छ। यस्तो होइन जो पहिला देवताहरू थिए उनीहरूको चित्र मेटिए। होइन, पुराना भन्दा पुराना देवताहरूको चित्र धेरै दिलदेखि लिन्छन् किनकि शिवबाबा पछिका हुन् देवताहरू। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूले धारण गरिरहेका छौ, अरूलाई मार्ग बताउन। यो हो बिल्कुल नयाँ पढाइ। तिमीले नै यो सुनेका थियौ र पद पाएका थियौ, अरू कसैले जानेका छैनन्। तिमीलाई परमपिता परमात्माले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। महाभारत लडाईं पनि प्रसिद्ध छ। के हुन्छ त्यो त पछि गएर देख्छौ। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। दिन-प्रतिदिन मनुष्यहरूलाई प्रेरणा मिल्दै जान्छ। भन्छन् पनि, विश्व युद्ध लाग्छ। त्यो भन्दा पहिला तिमी बच्चाहरूले आफ्नो पढाइबाट कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। बाँकी असुरहरू र देवताहरूको कुनै लडाईं हुँदैन। यस समय तिमी ब्राह्मण सम्प्रदाय हौ, जो फेरि गएर दैवी सम्प्रदाय बन्छौ। त्यसैले यस जन्ममा दैवी गुण धारण गरिहेका छौ। नम्बरवन दैवी गुण हो पवित्रता। तिमीले यस शरीरद्वारा कति पाप गर्दै आएका छौ। आत्मालाई नै भनिन्छ पाप आत्मा। आत्माले यी कर्मेन्द्रियहरूबाट कति पाप गरिरहन्छ। अब नराम्रो नसुन.... कसलाई भनिन्छ? आत्मालाई। आत्माले नै कानद्वारा सुन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ– तिमी आदि सनातन देवी-देवता धर्मका थियौ, चक्कर लगाउँदै आएका छौ, अब फेरि तिमीलाई त्यही बन्नु छ। यो मीठो स्मृति आएमा पवित्र बन्ने हिम्मत आउँछ। तिम्रो बुद्धिमा छ– हामीले कसरी ८४ को पार्ट खेल्यौं। सबैभन्दा पहिला हामी यो थियौं। यो कहानी हो नि। बुद्धिमा आउनु पर्छ– ५ हजार वर्ष पहिला हामी नै देवता थियौं। हामी आत्मा मूलवतनका निवासी हौं। पहिला यो अलिकति पनि ख्याल थिएन– हामी आत्माहरूको त्यो घर हो। त्यहाँबाट हामी आउँछौं पार्ट खेल्न। सूर्यवंशी-चन्द्रवंशी.... बन्यौं। अहिले तिमी ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मणवंशी हौ। तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। ईश्वर बसेर तिमीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। यहाँ परम पिता, परम शिक्षक, परम गुरु पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको मतबाट सबै मनुष्यहरूलाई श्रेष्ठ बनाउँछौं। मुक्ति-जीवनमुक्ति दुवै श्रेष्ठ छ। हामी आफ्नो घर जान्छौं फेरि पवित्र आत्माहरू आएर राज्य गर्छन्। यो चक्र हो नि। यसलाई भनिन्छ स्वदर्शन चक्र। यो ज्ञानको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ– तिम्रो यो स्वदर्शन चक्र रोकिनु हुँदैन। घुमाइरह्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीले यस रावणमाथि विजय पाउँछौ, पाप मेटिन्छ। अब स्मृति आएको छ, स्मरण गर्नको लागि। यस्तो होइन, बसेर माला जप गर्नु छ। आत्मामा भित्र ज्ञान छ जुन तिमी बच्चाहरूले अरू भाइ-बहिनीहरूलाई सम्झाउनु छ। बच्चाहरू पनि मदतगार त बन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई नै स्वदर्शन चक्रधारी बनाउँछु। यो ज्ञान मभित्र छ त्यसैले मलाई ज्ञानका सागर, मनुष्य सृष्टिको बीजरूप भन्छन्। उहाँलाई बागवान भनिन्छ। देवी-देवता धर्मको बीज शिवबाबाले नै लगाउनु हुन्छ। अहिले तिमी देवी-देवता बनिरहेका छौ। यो कुरा सारा दिन स्मरण गरिराख्यौ भने पनि तिम्रो धेरै कल्याण हुन्छ। दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। पवित्र पनि बन्नु छ। स्त्री-पुरुष दुवै सँगै रहेर पवित्र बन्छौ। यस्तो धर्म त छैन। निवृत्ति मार्गमा त केवल पुरुष बन्छन्। भन्छन्– स्त्री-पुरुष दुवै सँगै पवित्र रहन सकिँदैन, मुश्किल छ। सत्ययुगमा थिए नि। लक्ष्मी-नारायणको महिमा पनि गाउँछन्।
अहिले तिमीलाई थाहा छ– बाबाले हामीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाएर फेरि देवता बनाउनु हुन्छ। हामी नै पूज्यबाट पुजारी बन्छौं। फेरि जब वाममार्गमा जान्छौं अनि शिवको मन्दिर बनाएर पूजा गर्छौं। तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो ८४ जन्मको ज्ञान छ। बाबाले नै भन्नुहुन्छ– तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले बताउँछु। यस्तो अरू कोही मनुष्यले भन्न सक्दैन। तिमीलाई अहिले बाबाले स्वदर्शन चक्रधारी बनाउनु हुन्छ। तिमी आत्मा पवित्र बनिरहेका छौ। शरीर त यहाँ पवित्र बन्न सक्दैन। आत्मा पवित्र बन्छ, अनि फेरि अपवित्र शरीरलाई छोड्नुपर्छ। सबै आत्माहरू पवित्र भएर जानु छ। पवित्र दुनियाँ अब स्थापना भइरहेको छ। बाँकी सबै स्वीट होममा जान्छन्, यो याद राख्नुपर्छ।
बाबाको यादको साथ-साथै घरको पनि याद अवश्य हुनुपर्छ किनकि अब फर्केर घर जानु छ। घरमा नै बाबालाई याद गर्नुपर्छ। हुन त तिमीले जानेका छौ– बाबा यस तनमा आएर हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ तर बुद्धि परमधाम, स्वीट होमसँग टुट्नु हुँदैन। टिचरले घर छोडेर आउनु हुन्छ, तिमीलाई पढाउन। पढाएर फेरि धेरै दूर जानुहुन्छ। सेकेण्डमा कहीं पनि जान सक्नु हुन्छ। आत्मा कति सानो बिन्दु हो। आश्चर्य मान्नुपर्छ। बाबाले आत्माको पनि ज्ञान दिनुभएको छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ– स्वर्गमा कुनै फोहोरी चीज हुँदैन, जसमा हात-पाउ अथवा कपडा आदि मैला हुन्। देवताहरूको कस्तो सुन्दर पहिरन हुन्छ। कति फस्टक्लास कपडा हुन्छन्। धुने पनि आवश्यकता हुँदैन। यिनलाई हेरेर कति खुशी हुनुपर्छ। आत्माले जान्दछ– भविष्य २१ जन्म हामी यो बन्छौं। बस्, हेरिरहनु पर्छ। यो चित्र सबैसँग हुनुपर्छ। यसमा धेरै खुशी हुनुपर्छ– हामीलाई बाबाले यस्तो बनाउनु हुन्छ। यस्ता बाबाका हामी बच्चाहरू फेरि रून्छौं किन! हामीलाई कुनै चिन्ता कहाँ छ र! देवताहरूको मन्दिरमा गएर महिमा गाउँछन्– सर्वगुण सम्पन्न.... अच्युतम् केशवम्.... कति नाम भन्दै जान्छन्। यो सबै शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, जुन याद गर्छन्। शास्त्रहरूमा कसले लेख्यो? व्यासले या कोही नयाँ-नयाँले पनि बनाइरहन्छन्। ग्रन्थ पहिला धेरै सानो थियो, हातले लेखिएको। अहिले त कति ठूलो बनाइदिएका छन्। अवश्य थपेको हुनुपर्छ। अब गुरुनानक त आउँछन् नै धर्मको स्थापना गर्न। ज्ञान दिने त एउटै हुनुहुन्छ। क्राइस्ट पनि आउँछन् केवल धर्म स्थापना गर्नको लागि। जब सबै आउँछन् फेरि त फर्केर जान्छौ। घर पठाउने को? के क्राइस्ट? होइन। उनी त भिन्न नाम-रूपमा तमोप्रधान अवस्थामा छन्। सतो, रजो, तमोमा आउँछन् नि। यस समय सबै तमोप्रधान छन्। सबैको जडसमान अवस्था छ। पुनर्जन्म लिंदै लिंदै यस समय सबै धर्मका आएर तमोप्रधान बनेका छन्। अब सबै फर्केर जानु छ अवश्य। फेरि चक्र घुम्नु छ। पहिला नयाँ धर्म हुनुपर्छ जुन सत्ययुगमा थियो। बाबा नै आएर आदि सनातन देवी-देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। फेरि विनाश पनि हुनु छ। स्थापना, विनाश फेरि पालना। सत्ययुगमा एउटै धर्म हुन्छ। यो स्मृति आउँछ नि। सारा चक्र स्मृतिमा ल्याउनु पर्छ। अब हामी ८४ को चक्र पूरा गरेर, फर्केर घर जान्छौं। तिमी बोल्दा-चल्दा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हौ। उनीहरूले फेरि भन्छन्– कृष्णको स्वदर्शन चक्र थियो, त्यसद्वारा सबैलाई मारे। अकासुर बकासुर आदिको चित्र देखाएका छन्। तर यस्तो कुनै कुरा हुँदै होइन।
तिमी बच्चाहरू अब स्वदर्शन चक्रधारी बनेर रहनु छ किनकि स्वदर्शन चक्रले तिम्रो पाप काट्छ। आसुरीपन समाप्त हुन्छ। देवताहरू र असुरहरूको लडाईं त हुन सक्दैन। असुर हुन्छन् कलियुगमा, देवताहरू हुन्छन् सत्ययुगमा। बीचमा छ संगमयुग। शास्त्र हो नै भक्ति मार्गको। ज्ञानको नाम निशान छैन। ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ, सबैको लागि। बाबासँग सिवाय कोही पनि आत्मा पवित्र बनेर फर्केर जान सक्दैन। पार्ट अवश्य खेल्नुपर्छ, त्यसैले अब आफ्नो ८४ को चक्रलाई पनि याद गर्नु छ। हामी अब सत्ययुगी नयाँ जन्ममा जान्छौं। यस्तो जन्म फेरि कहिल्यै मिल्दैन। शिवबाबा फेरि ब्रह्माबाबा। लौकिक, पारलौकिक र यी हुन् अलौकिक बाबा। यस समयको नै कुरा हो, यिनलाई अलौकिक भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले उहाँ शिवबाबालाई स्मरण गर्छौ, ब्रह्मालाई होइन। गर्न त ब्रह्माको मन्दिरमा गएर पूजा गर्छन्, त्यो पनि तब पुज्छन् जब सूक्ष्मवतनमा सम्पूर्ण अव्यक्त स्वरूपमा हुन्छन्। यी शरीरधारी पूजाको लायक छैनन्। यी त मनुष्य हुन् नि। मनुष्यको पूजा हुँदैन। ब्रह्माको दाह्री देखाउँछन् त्यसैले थाहा हुन्छ उनी यहाँका हुन्। देवताहरूको दाह्री हुँदैन। यी सबै कुरा बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। तिम्रो नाम प्रत्यक्ष हुन्छ त्यसैले तिम्रो मन्दिर पनि बनाइएको छ। सोमनाथको मन्दिर कति उच्च भन्दा उच्च छ। सोमरस पिलाउनु भयो फेरि के भयो? फेरि यहाँ पनि देलवाडा मन्दिर हेर। मन्दिर हुबहु यादगार बनेको छ। तल तिमी तपस्या गरिहेका छौ, माथि छ स्वर्ग। मनुष्यले सम्झन्छन् स्वर्ग कहीं माथि छ। मन्दिरमा तल स्वर्ग कसरी बनाउने! त्यसैले माथि छतमा बनाइदिएका छन्। बनाउनेहरू कसैले बुझ्दैनन्। ठूला-बडा करोडपति छन्, उनीहरूलाई यो सम्झाउनु छ। तिमीलाई अहिले ज्ञान मिलेको छ त्यसैले तिमीले धेरैलाई दिन सक्छौ। अच्छा!
१) भित्रैदेखि आसुरीपनालाई समाप्त गर्नको लागि घुम्दा पनि स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। सारा चक्र स्मृतिमा ल्याउनु छ।
२) बाबाको यादको साथ-साथै बुद्धि परमधाम घरमा पनि लागिरहोस्। बाबाले जुन स्मृतिहरू दिलाउनु भएको छ, त्यसलाई स्मरण गरेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ।
सम्पूर्ण आहुतिद्वारा परिवर्तन समारोह मनाउने दृढ संकल्पधारी भव
जसरी भनाई छ– धरत परिये धर्म न छोडिये। त्यस्तै कुनै पनि परिस्थिति आओस्, मायाको महावीर रूप सामुन्ने आओस् तर धारणा नछुटोस्। संकल्पद्वारा त्याग गरिएको व्यर्थ वस्तु संकल्पमा पनि स्वीकार नहोस्। सदा आफ्नो श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति र श्रेष्ठ जीवनको समर्थ स्वरूपद्वारा श्रेष्ठ पार्टधारी बनेर श्रेष्ठताको खेल खेल्दै गर। कमजोरीहरूको सबै खेल समाप्त होस्। जब यस्तो सम्पूर्ण आहुतिको संकल्प दृढ हुन्छ तब परिवर्तन समारोह हुन्छ। यस समारोहको मिति अब संगठित रूपमा निश्चित गर।
सच्चा हीरा बनेर आफ्नो प्रकम्पनको प्रकाश विश्वमा फैलाऊ।